Umsikazi ngamunye ubhekene nezinkinga zokususa izitshalo zokugqoka. I-detergents yanamuhla imemezela ukulahlwa okusheshayo kuzo ngesikhathi sokuhlanza. Kodwa ama-removing stain njalo awabhekanisi namabala, njengokususa upende kusuka ezembatho akulula ukugeza. Ngakho-ke, sidinga iseluleko esihlakaniphile kubantu abanolwazi ukuze bahlale behlelekile. Kulesi sihloko - ukubuka kabanzi amathiphu ajwayelekile, ukususa upende kusuka ezingutsheni.
Ungakhohlwa ukuthi indwangu ngayinye iphendula izinto ezihlukile ngendlela yayo. Ngakho-ke, uma iseluleko esisodwa sokususa ipeyinti ezigqoke izingubo kusiza ukuhlanza i jeans, akusikho iqiniso lokuthi into efanayo iyokwenzeka kwenye into. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uqale umsebenzi, zama ukuthola ucezu lwendwangu bese uzama phezu komphumela wamakhemikhali.
Umphumela wokususa izitshalo kuxhomeke kuhlobo lopende. Uma eklasini lokudweba ingane yakho itshale ibala kusuka ku-gouache, khona-ke ungakwazi ukumane ususe izindawo ezibandayo ezigqoke izingubo ngamanzi abandayo. Uma usheshe uqale ukugeza, upende luzobunjwa bese lufakwa ngaphakathi kwendwangu.
Izinto ezimbi nakakhulu zinezinhlu zeoli. Iyiphi indlela esetshenziselwa ukwelashwa kwendawo?
Amafutha we-sunflower noma i-margarine asetshenziselwa ukunciphisa ibala elivela kulo upende. Kwezinye izinto (uboya, uhlobe, i-cashmere nezinye izicubu ezibucayi), i-oli ingaba yikhambi kuphela. Ngemuva kokususwa, kubalulekile ukwelula indawo lapho kwakukhona khona ibala, i-agent esebenzayo noma isisombululo sokwebhaka soda.
I-Turpentine - uketshezi olunezici ze-pine dissolves tar, amafutha, amafutha. Ngakho-ke i-turpentine ifakwe ekubunjweni kwenhlanganisela ukususa izitshalo zokudweba kwamafutha.
I-Glycerin njenge-solvent isetshenziselwa embonini yokudla. Abantu bakithi bayiphathe futhi bayisebenzise ukususa ama-paint stains, kuphela ngesimo esishisayo. Ngale ndlela, upende ususiwe uma kunengozi yokulimaza umbala womkhiqizo.
Utshwala lwe-ammonium luxubene nenye utshwala ngo-½ kanti upende we-aniline ususwe. Ngaphezu kwalokho, i-ammonia iphetha ukwelashwa kwebala ngemva kwesenzo sezinye izixazululo. Isixwayiso sokusetshenziswa - sishintsha umbala wendwangu.
I-Acetone - i-solvent - isetshenziselwa i-swab yekotini futhi ibala liphathwa kusukela emaphethelweni kuya maphakathi ukuze lingasabalalisi. Akunconywa ukuthi usebenzise izikhumba, izicubu zokwenziwa.
Iphesolini ehlanjululweyo inhlanganisela ne-acetone, nayo, inikeza imiphumela emihle ekukhipheni upende kusuka ezingutsheni. Ukusetshenziswa kwephethiloli kumathangi omshini akunconywa, ngoba kungase kuqukethe ezinye ukungcola.
Ubumba obumhlophe obuxubene nophethiloli, lubonakala phezu kwebala. Ngemuva kokuba uphethiloli usomile, ubumba luvele lukhishwe. Usizo olunjalo lufanelekile ezintweni ezigcotshwe ngamafutha.
I-bleach noma i-hydrogen sulfate isetshenziselwa ukugcoba ukuze kususwe amanothi emva kokuqedwa kwendwangu emhlophe.
Uma ungcolile ekhaya noma ku-cottage, ngaphambi kokuba ususe upende ezembatho zakho, khumbula ukuthi upende. I-solvent yehlobo oluthile lokupenda lisebenza ngokuphumelelayo. Ngakho-ke, lapho uthenga ipende, khetha i-solvent efanelekayo. Khona-ke ungakwazi ukususa isichusha ngokushesha.
Kunzima kakhulu ukususa upende lendala kusuka ezingutsheni, ngakho ungalibali le msebenzi ngomuso, naphezu kwemizwa emibi. Uma upende usuvele usubile, ungabhala ngobumnene ummese, bese uthayipha ngamafutha noma nge-turpentine. Ngemuva kwalokho, xhuma ama-solvents - i-acetone, i-petroli, utshwala - yini eseduze. Uma upende luzokwehla ngemuva kwendwangu, lususe ngokunyakaza okucophelela ukuvimbela ukuba lingene ngaphakathi. Ukuze wenze lokhu, udinga ukushintsha ama-swabs ekotini. Izindawo zokulala kufanele zihlanjululwe nge-ammonia noma i-glycerine, zisakaze kwisisombululo soda. Amafutha, asele emafutheni, angahlanzwa nge-washing machine detergent.